FARRA MO FALA?Bara kana farra malee falli dhibe. Namuu wol balaaleffachuu qofa irratti bobba’eera. – Kichuu
HomeAfaan OromooTVFARRA MO FALA?Bara kana farra malee falli dhibe. Namuu wol balaaleffachuu qofa irratti bobba’eera.
FARRA MO FALA? Bara kana farra malee falli dhibe. Namuu wol balaaleffachuu qofa irratti bobba’eera.
Bara kana farra malee falli dhibe. Namuu wol balaaleffachuu qofa irratti bobba’eera. Osoo arginuu biyyi gubachuuf deemaa jirti. Bilisummaa woreegama lubbuu Qeerroo kumaatamaatiin gonfanne akka itti fayyadamnu wollaallee akka hin qisaasamne sodaadhe. Sabni kan qabsaawaa turreef kan lubbuu itti woreege akka sabni keenna sodaa jalaa bayee nagaa fi tasgabbiidhaan jiraatu. Kan barbaade akka deeggaruu danda’u, bifa barbaadeen ijaaramuu akka danda’uu fi bilisa ta’ee kan barbaade akka filatu dha.
Hacaaluun kun Qorsa! Qaruu isaa hedduu na gammachiise.
Quuqamaa sabaa ti. Hunduu adoo dantaa dhunfaa fi tan garee achi qabee dantaa sabaa dursee silaa yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaan akka USA taati. Nagaa waaraa, misooma jeefa hinqannee fi kabajaa horanna silaa.
Ammalle kan nu baasu *Tokkoomuu dha. Tokkoomuun yaada wolii woliif kabajuu dha. Tokkoomuun dantaa dhunfaa fi dantaa garee dura dantaa sabaa caalchifachuu dha. *Tokkoomuun ammoo Humnomutti nu geessa. Tokkoomnaan ni humnoomna. *Humnoomuun ammoo duroomutti nu geessa. TOKKOOMUU -HUMNOOMUU -DUROOMUU. Wantoonni kun sadiin baayyee barbaachisoo dha.
Tokkummaan sabaa dhufeera. Kan hin dhufin tokkummaa jaarmiyaaleee siyaasaa ti. Sabni bilchaataa fi qaroon dhaabbilee siyaasa ifii dhiibee tokko godhuu ni danda’a. Sabni bilchinna hin qabne tokko jala galee kan biraa irratti duula. Sabni qaroon ammoo tokkoomtan malee isin hin deeggarru jedhee dida. Kamtu dhugaa qaba jedhee adda baasa. Jaalannes jibbines jaarmiyaaleen amma wol-morkitu martuu ilmaanuma saba tokkoo ti. Kanaafuu sabni beekaan wolitta araarsa malee akka wol ajjeesan hin eeyyamuuf. Sabni keenna tokkoof loogee tokko dhiibuun fafa.
Kan ta’uu qabu marti isaaniituu sagantaa siyaasaa fi muldhata saba isaaniif qaban akka himan; akka saba ofii ijaarratan haala mijeessuu dha. Kana ammoo uummanni Oromoo kumaatamaan itti woreegamee haala mijeessee jira. Haalli kun mijatee jira. Uummanni kan dandeettii bulchiinsaa caalmaa qabu, kan jaalala uummataa caalmaa qabu, kan muldhataa fi imaammata bareedaa qabu sagalee ofiitiin filachuu dha.
(WBOn maal haa ta’u gama mootummaatiin maaltu hanqate? Gama ABO tiin ho kan jedhu kanatti aansee kataba.) Ammaaf Hacaaluu caqasaa